Coup d’Etat”-n’i Andry Rajoelina : Voatery “mamelatra” ireo reny very asa -
AccueilRaharaham-pirenenaCoup d’Etat”-n’i Andry Rajoelina : Voatery “mamelatra” ireo reny very asa
24/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niteraka resabe ilay sarin’ny zanak’i Andry Rajoelina nivoaka tao amin’ny gazety Le Citoyen ny faran’ny herinandro lasa teo. Avy hatrany dia nihazakazaka namaly izany i Andry Rajoelina tany Ihosy, ary vao mainka nivandravandra ilay foto-pisainana «putschiste» ao aminy. Hoy indrindra mantsy ity lehiben’ny mpanongam-panjakana ity: « izay mikitika ny zanako dia mikitika ny vahoaka malagasy ».
Dia apetraka amin’ity « putschiste » ity ny fanontaniana manao hoe: “mba niaina ny fahorian’ny zanak’ireo vahoaka very asa miisa 300 000 nanerana ny Nosy nandritra iny fanonganam-panjakana hatramin’izao ora hanoratana eto izao ve aloha ny zanak’izany Andry Rajoelina izany e? Mba voatery nandao sekoly tsy fidiny noho ny fahantrana lalina naterak’iny fanonganam-panjakana iny ve ireo zanany, ary niaina izany tsy fahafahana mitsabo tena vokatry ny fikatonan’ireo CSB II miisa 214 nanerana an’i Madagasikara ihany koa ve ?».
Adinon’ity « putschiste » ity fa fiainam-pianakaviana an’arivony maro no rava nanomboka ny taona 2009-2013, ary zana-bahoaka an-tapitrisany no niaritra hanoanana tsy roa aman-tany. Tsy fantatr’ity mpanongam-panjakana ity angamba fa voatery nivaro-tena ny ankamaroan’ireo renim-pianakaviana very asa tany amin’ireo orinasa afaka haba, voatery namelatra ny feny mba nihinanan’ny zanany vary iray kapoaka, koa vahoaka malagasy iza ity lazainy sa ireo mpitondra HAT lasa miliardera tao anatin’ny dimy taona?
Mba niaina izany fahoriam-bahoaka izany ve ny vady aman-janak’i Andry Rajoelina? Mba voatery namelatra ny feny teny amin’ny « espalanade » Analakely hamelomany ireo zanany koa ve i Mialy Rajoelina? Tetsy andanin’izany, orinasa maherin’ny 250 no voatery nanakatom-baravarana nandritra ny Tetezamita, araka ny fanambarana nataon’ny minisiteran’ny Asa sy Lalàna Sosialy ny volana May 2009. Tokantrano sy ankohonana firy no latsaka tanaty fahantrana lalina vokatr’izany, koa vahoaka inona ity ambaran-dRajoelina fa voakitika rehefa mikitika ny zanany?
Zaza tsy ampy taona
Mba tokony mandalo eny 67 Ha, Tsaralalàna, “esplanade” Analakely ity mpanongam-panjakana ity mijery ny tena fahorian’ny zana-bahoaka very asa vokatr’iny “coup d’Etat” nataony tamin’ny 2009 iny. Firy akory ireo zaza tsy ampy taona (16-17 taona) mivaro-tena an-dalambe satria very asa ireo ray aman-dreniny, azon’i Andry Rajoelina vakiana ao amin’ny tatitry ny UNICEF ary ireo rantsa-mangaikan’ny Firenena Mikambana ny tarehimarika momba izany. Nitombo isa aoka izany ny vohoka tsy niriana, ny aretina azo avy amin’ny firaisan’ny lahy sy ny vavy (azon’i Andry Rajoelina jerena ihany koa ny tarehimarika navoakan’ny OMS).
Nirongatra ihany koa ireo tovovavy tsy ampy taona mandefa tolotra fivarotan-tena amin’ny alalan’ny “internet », ireo efitrano fantatra amin’ny hoe « salon de massage » nanomboka ny taona 2009 mbola vokatry ny fahantrana lalina nateraky ny krizy sy ny fahaverezan’asa maro nandritra ny fitondrana Andry Rajoelina. Izany no fahoriana niainan’ny zana-bahoaka tsy ampy taona vokatry ny fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina sy ny MAPAR ary ny TGV, ankoatra ireo voatery manao asa tsy mifanentana amin’ny vatan’ireo ankizy tsy ampy taona.
Marihana moa fa niakatra ho 500 amin’ny renim-pianakaviana 100 000 no maty mandritra ny fiterahana, tarehimarika navoakan’ny UNICEF ny taona 2009. Fanontaniana farany apetraka amin’ity “jeune putschiste” ity sy ny forongony ny hoe: “ny zana-bahoaka irery ihany ve izany no tokony hatao sorona hakana fahefana sy natao hizaka fahantrana sy fahoriana?”.